सुनसरीमा स्कुल व्यावस्थापन समितिका अध्यक्षको गोली हानी हत्या ! - Everest Dainik - News from Nepal
सुनसरीमा स्कुल व्यावस्थापन समितिका अध्यक्षको गोली हानी हत्या !
सुनसरी, असोज ४ ।
सुनसरीको हरिजगर गाउँपालिका -१ भुताहामा स्कुल व्यावस्थापन समितिका अध्यक्षको गोली हानी हत्या भएको छ । भारतको भिरपुरबाट चार जनाको समुहमा आएका व्यक्तिले स्थानीय विध्यालयका स्कुल व्यावस्थापन समितिका अध्यक्ष खुर्सिद मियाँ अन्सारीको हत्या भएको छ ।
हत्या कुन कारणले हत्या भएको भन्ने कुरा खुल्न आएको छैन् । उनले यस अघिनै आफु असुरक्षित रहेको प्रहरीलाई जानकारी गराएका थिए । घटनास्थल वरीपरी अहिले व्यापक रुपमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
उक्त समुहले प्रहरीमाथि पनि गोली प्रहार गरेको थियो । आक्रमणबाट एक प्रहरी घाइते भएका छन् ।